လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ ကျူးကျော်များကို ဖယ်ရှားခြင်းမပြုရန် တိုင်းအစိုးရထံတင်ပြ - Yangon Media Group
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ ကျူးကျော်များကို ဖယ်ရှားခြင်းမပြုရန် တိုင်းအစိုးရထံတင်ပြ
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၇ – လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ ကျူးကျော်အိမ် များကို ဖယ်ရှားခြင်းမပြုရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ ကျူးကျော်နေထိုင်သူများက တင်ပြထားကြောင်းသိရသည်။
ကျူးကျော်နေထိုင်သူများကို ဖယ်ရှားရာတွင် အကြမ်းဖက်နှင် ထုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရန်၊ လက်ရှိနေရာတွင် အဆင့်မြှင့်နေထိုင်ခြင်းကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကျူးကျော်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာ တွင် အစိုးရတစ်ဖွဲ့တည်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ အရပ်ဘက်အဖွဲ့၊ ရပ် ရွာခေါင်းဆောင်များနှင့် ပူးပေါင်းဖြေရှင်းရန်အပါအဝင် အချက် ၆ ချက်ကို ဇူလိုင် ၇ ရက်က တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကျူးကျော်နေထိုင်သူများဘက်မှ ဦးဆောင်တင်ပြခဲ့သူ ဦးဇာနည်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
”ကျွန်တော်တို့တွေက နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီးမှာ အိမ်ခြေရာခြေ တွေပျက်စီးပြီး ရန်ကုန်ကို တက်လာတာပါ။ ဒီရောက်တော့ ရတဲ့အလုပ် လုပ်ကိုင်ရင်း မိသားစုနေစရာအတွက် ငွေကြေးမတတ်နိုင်လို့ အခုလို ကျူးကျော်နေထိုင်ရတဲ့ဘဝ ရောက်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအတွက် အစိုးရ ကို သက်ညှာစွာစဉ်းစားပေးဖို့ တင်ပြတာပါ”ဟု ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ ကြီး ဒေးဒရဲမြို့နယ်မှ ပြောင်းရွှေ့လာသူ ဦးဇာနည်ကပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ¤င်းတို့ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးရန် အာဏာပိုင်များမှ အကြောင်းကြားခြင်းမျိုး မရှိသော်လည်း အချို့သောဒေသများတွင် ကျူးကျော်များအား ဖယ်ရှားနေသည့်သတင်းများအရ စိုးရိမ်မှုဖြစ် ပေါ်ကာ တိုင်းအစိုးရထံ တင်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း မော်ကျွန်းမြို့နယ်မှ ပြောင်းရွှေ့လာသူ ဦးစိုးက ¤င်းတို့အနေဖြင့် မည်သည့်အချိန်တွင် ဖယ်ရှားခိုင်းမည်ကို စိုးရိမ်နေ ရကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ဆင်းရဲသားကျူးကျော်များအတွက် အိမ် ရာများစီစဉ်ပေးရန် မျှော်လင့်ကြောင်း၊ ¤င်းတို့နေထိုင်လာသည်မှာ ၁ဝ နှစ်ပါးကြာပြီဖြစ်ကြောင်း ¤င်းကပြောသည်။
”ကျွန်တော်တို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား တွေပါဗျာ။ စီးပွားရေးအခက်အခဲတွေကြောင့် ဒီလိုကျူးဘဝရောက် ခဲ့ရတာပါ။ ဒီမှာ မီးရေကအစ ဘာမှမရှိပါဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ လည်းမရှိလို့ မှုခင်းတွေဖြစ်လာရင် ဘယ်သူ့ တိုင်ရမလဲဆိုတာတောင် စဉ်းစားလို့မရတဲ့ အခြေအနေပါ”ဟု ¤င်းကပြောသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ် အမှတ် (၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဦးမြတ်မင်းသူက ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင် စက်မှုဇုန်အတွင်းရှိကျူး ကျော်နေထိုင်သူအချို့ ¤င်းထံသို့ လာရောက်တွေ့ဆုံကာ တောင်းဆို ချက်များတင်ပြခဲ့သဖြင့် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့သို့ ထပ်မံတင်ပြရန် အကြံ ပြုခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။
”သူတို့ဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခွဲခြားဆက်ဆံလို့တော့ မရပါဘူး။ သို့သော် လက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေ တွေကို လိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။ သူတို့တင်ပြတဲ့အထဲမှာ စက်မှုဇုန်ထဲ မှာ ဆက်လက်နေထိုင်ရေးအတွက်ဆိုတာ တစ်ဖက်ကစဉ်းစားမယ်ဆို ရင် လက်ခံနိုင်ဖို့တော့ မလွယ်လှပါဘူး”ဟု ¤င်းကပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် ကျူးကျော်များအတွက် အိမ်ရာထူထောင်ပေးရန်အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲလျက်ရှိသည်ဟု ၄င်း ကပြောသည်။
မယ်ဆိုင်ရေချောင်းမှ တရားမဝင်ဖြတ်သန်းလာသော ထိုင်းနိုင်ငံသား တစ်ဦးကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ြ?
၀န်ကြီးများရုံးအတွင်း ရှစ်လေးလုံးသမိုင်း ပြတိုက်ထားရှိရန် မသေချာသေးဟုဆို
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို ပါတီပိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူနိုင်ရန် ဒီချုပ်ဆက်လက်စစ?
ပိုက်ဆံရှိမိဘများ သားသမီးများကို ပုဂ္ဂလိကကျောင်းထားသည့်အစဉ်အလာကို အားမပေးလိုဟု နိုင် ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆို